Malunga nathi -iJiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd.
Umthengi wokuqala, ukunyaniseka, ukukhuthala kunye nokuyila, ukujolisa ebantwini, ukusebenza okuthembekileyo nokuzinzileyo
Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd. kuyinto ishishini yenzululwazi kunye nobuchwepheshe leyo inxaxheba kuphando lobungcali kumatshini wendlela kunye nophuhliso, uyilo, imveliso, kunye neentengiso. Ime emazantsi endlela iRunyang Yangtze River Highway Bridge, iNdlela, kaloliwe, kunye nokuhlangana kwenqanawa, indlela yezothutho yokudibanisa imilambo kunye nolwandle izisa inzuzo enqabileyo yendawo.
Inkampani iseke kwaye yaphucula inkqubo yophando kwezenzululwazi kunye nezobuchwephesha, inkqubo yemveliso, inkqubo yolawulo lomgangatho, inkqubo yenkonzo yentengiso kunye nenkqubo yolawulo lolwazi, ikhula ngokukhawuleza iyeyona ndawo iphezulu yentengiso yasekhaya, elona shishini likhulu lokumakisha umatshini laseAsia. Iqela lenkampani i-R & D lisombulule ngempumelelo uninzi lweengxaki ezikumgangatho wehlabathi, kubandakanya nokususa okungonakalisiyo kwemigca yokumakisha, ukususwa okungonakalisiyo ukhwekhwe, ukususwa komhlwa okumanzi okumanzi nokupeyinta, ukunyibilika okushushu komatshini wokumakisha okuzenzekelayo, umatshini omnye wokumakisha imigca njl. Isithuthi sokungenisa irabha kwisikhululo senqwelomoya sinokususa kwindawo leyo kwimizuzu emi-5 siphinde sisebenzise umphunga wamanzi kunye neesundries ngokugqibeleleyo. Ulawulo lwe-ERP lwenkampani lutshintsha ukuhamba kwemali eyinkunzi yemveli, ukuhamba kwezinto, ukuhamba kwemveliso, kunye nokuhamba kolwazi kwikhompyuter ekusebenzeni kakuhle kwedijithali.
Isazela senkampani sisebenzisa isicwangciso-qhinga sokuphuhlisa i-One Belt kunye neNdlela enye, iimveliso zayo zithunyelwa e-Egypt, Spain, Kazakhstan, South Korea, Kenya, Malaysia, USA, Bangladesh, South Africa, Saudi Arabia, Turkey, Singapore, Iraq, India, Jemani, kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Inkampani iseke ubambiswano lwexesha elide kunye nozinzo kunye ne-US Graco Inc.ukuqhubeka ngokufunxa isondlo esiphambili kwihlabathi ukuqinisekisa ukuba umatshini wokumakisha ezindleleni uhlala kwindawo ephezulu yesayensi kunye netekhnoloji, kwaye uyakuqonda ngempumelelo ukufakwa kwamanye amazwe .
Ilanga ligcwalisa uhambo, umoya kunye namafu ahamba. Inkampani yamkela ngentliziyo iphela abathengi abatsha nabadala ukuba badibanise izandla ekwenzeni umso ongcono wendlela yezithuthi kwihlabathi liphela.